Ithegi: isipaji esiphathwayo | Martech Zone
Ithegi: isipaji esiphathwayo
NgoLwesibini, Novemba 24, 2015 NgoLwesibini, Novemba 24, 2015 Douglas Karr
Ndiphatha i-iPhone yam kwimeko entle yesikhumba esenziwe ngesandla evela ePad kunye neQuill enegumbi lesazisi sam kunye namanye amakhadi etyala kodwa hayi enye into eninzi. Ngenxa yoko, ndixhomekeke kwiiapps zeselfowuni kunye nesipaji sam esiphathwayo kancinci. Enye insiza endiyithandileyo yiRing Key, indivumela ukuba ndilahle onke amakhadi eklabhu yam kwaye ndibeke endaweni enye. Kungekudala emva kokulayisha iRing Key,
I-Vibes ikhuphe umphathi weWallet, isisombululo se-wallet esinqamlezayo, njengenxalenye yeqonga labo lokuthengisa ngeCatapult. Impumelelo yokuthengisa ngefowuni ixhomekeke kubuntu kunye nomxholo onamandla. Iziphumo ziyaphucuka xa iminikelo ibaluleke ngakumbi kwinto eyenziwa ngumsebenzisi, xa esenza kunye nalapho bakhoyo. Zombini iiPasbook kunye ne-Google Wallet Object APIs zidityanisiwe kuMphathi weWallet. Ngokwiphepha lemveliso lomphathi weWallet: Yenza- Sebenzisa izixhobo zoMphathi weWalethi ukuya